Key shell N'ihi Toyota
Ulo olu Mkpọchi
Ngwá ọrụ LISHI
Nchekwa onwe Programmer
Esi mmemme F usoro ụgbọ ala isi
Ugbu a BMW F usoro ohuru bu uzo abuo: CAS4 na FEM / BDC usoro. Methodszọ abụọ nke mmemme mgbochi-CAS4. Ejirila CAS4 mee ihe mmemme nke mmemme na afọ ndị mbụ ka ọtụtụ ndị isi masịrị ya. Onye mmemme na-agbawa mgbawa ahụ site na nnukwu nnabata ...
Ntuziaka maka teknụzụ igodo ụgbọ ala
Dị ka ọ na-adịkarị, ụgbọ ala niile na-eji otu usoro mmalite amalite ugbu a-ịgbanye ọkụ eletrik site na mgbanye ọkụ iji malite moto na mgbe ahụ njin ahụ. Otú ọ dị, ụzọ nke ịchịkwa ngbanwe ahụ dị iche iche dabere n'ụdị ụgbọ ala. Ọtụtụ n'ime ha na-eji ụzọ ọdịnala nke ịtinye igodo ahụ, whi ...
Otu esi emeso nsogbu igodo ụgbọ ala
Site na mmepe nke sayensị na teknụzụ, nhazi ndị ahụ enyerela anyị aka ịchekwa ọtụtụ nsogbu, nke enwere ike ịhụ site na isi ụgbọ ala. Igodo mbụ nke ụgbọ ala dị ka igodo ụlọ anyị. Ekwesịrị imeghe ọnụ ụzọ ụgbọ ala site na ịtinye igodo igwe na keyhole ....
olee otu igodo ụgbọ ala na-arụ ọrụ？
Isiokwu mbụ: na-arụ ọrụ ụkpụrụ nke ụgbọ ala isi mgbawa Otu n'ime ọtụtụ trendy electronic ngwaọrụ na ụgbọ ala, na smart isi usoro bụ nnọọ anya-akụta. The keyless ntinye technology eweta magburu onwe mma, na onye-isi mmalite na-eweta a zuru echiche nke technology, ma Ọ na-eri ihe si atụgharị nke ...
Usoro nke ịrụzi N'ihi na Tiguan mita na-egosi “igodo ahụghị”
Gbọ ala ahụ na-adọba ụgbọala na ihe mere na ị nweghị ike ibido n'echi ya? Otú ọ dị, oge a dashboard anaghị egosipụta “mgbochi-ezu ohi sistemụ arụ ọrụ”, mana “igodo ahụghị”, isi ụzọ dị mma, mana enweghị ike ịchọta ụgbọ ala ahụ! Kedu ihe bụ nsogbu? Mgbe nlebara anya nyocha, ...
Ofzọ nke wepụ Anti-ezu ohi maka The 4 version, 5 version nke Tiguan, Touareg, Q5, GOLF, Magotan
Volkswagen na Audi 4th na 5th ọgbọ mgbochi na-ezu ohi metụtara ọtụtụ ụdị, gụnyere Volkswagen CC, Magotan, Sagitar, Passat, Tiguan, Touareg 3.6L, Golf 6, Sharan, Audi Q5, A4L, ụfọdụ A6L, were gabazie. Ha nwere ike kagbuo mgbochi-ezu ohi, dị ka ojiji nke Bosch MED17.X, MEV17.X, ECD17.X serie ...
Kedu otu esi eme ma ọ bụrụ na ọnụ ụzọ akpọchiri n'ime ụgbọ ala?
Livingkpụrụ ndụ ndị mmadụ na-emewanyewanye nke ọma, ya mere, Usoro ndụ na-agba ọsọ. N'okwu a, ụfọdụ ndị ga - abụ ndị nkịtị, ha na - ahapụkarị obere akpa ha ma ọ bụ ihe n'ụlọ mgbe ha na - apụ apụ.
Ebee ka ị ga-esi nweta igodo ụgbọ ala nnọchi？
Kedu ka esi eme ma ọ bụrụ na ị tufuo igodo ụgbọ ala? Ọtụtụ ndị nwere ụgbọ ala na-enwe nsogbu ndị a. Mgbe e nyefere ụgbọala ọhụrụ ahụ, e nwere igodo abụọ. Otu onye furu efu ka nwere igodo mapụtara, mana kedụ ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na igodo ahụ efunahụ ya? Mgbe ahụ ị ga-adakọrịrị igodo ahụ. Taa, m ga-agwa gị otu ị ga - esi dakọta remot ...
Mgbanwe nke ego ụlọ akụ etiti: nyochaa akụkọ ihe mere eme na mbupụ n'ụsọ | Bank nke ndi mmadu nke China_Sina Finance_Sina.com
Otu Ant ahụ nọ ebe a! Ọktọba 29! Mepee akaụntụ ugbu a wee kwadebe maka ịzụta! [Banye n'ụgbọ ala ahụ ozugbo ka ị bụrụ onye na-ekenye gị ma nweta elele mmeghe akaụntụ! Ego nke etiti ụlọ akụ bụ ego na-adịte aka nke thelọ Akụkụ Ndị Mmadụ nke China nyere, nke ụlọ akụ na-azụ ahịa na-akwụ ụgwọ na ...
Kpọtụrụ ụlọ ọrụ nrụzi Hazie igodo ọhụrụ Ọ bụrụ na ịhọrọ ịtọlite ​​ebe nrụzi ahụ na igodo ọhụrụ, mgbe ahụ ịkwesịrị ịnye ụgbọala na NJ onye nwe ya. Dị ka ụdị dị iche iche si dị, ụlọ nrụzi ahụ chọrọ ka onye nwe ya nye paswọọdụ mgbochi-oji 17-mkpụrụ maka igodo nhazi. T ...
Naanị mepee ụzọ ụgbọ oloko Ọtụtụ ụgbọ ala nwere ike mepee ụzọ ụgbọ ala mgbe ịpịrị igodo dịpụrụ adịpụ, naanị mgbe ịpịrị ya ugboro abụọ, enwere ike imeghe ọnụ ụzọ niile. Driversfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala na-eburu ụgbọ ala n'ime ebe a na-adọba ụgbọala, ọ bụrụ na ha mepee ụzọ ụgbọ ala, ha nwere ike igbochi ndị ọjọọ ịbanye n'ụgbọala ahụ ...
Nyekwuo gị aka
site ha na 20-07-15
Usoro usoro Deba aha na akaụntụ gị site na email gị - Banye - Tinye ihe na oke na ụgbọ ahụ - Nyefee (lelee) - Họrọ onye na-ere ahịa Ọrụ anyị 1.Anyị na-enye ọtụtụ ụdị igodo ụgbọ ala dị iche iche, ibe transponder, ndị mmemme mmemme, ihe mkpuchi mkpuchi. 2. wdg. ọ bụla jụrụ ga-aza w ...
ỌZ FREE KWES FREER FREE IHE 13823288671